Daawo muuqaalka: Dowlada Soomaaliya oo guddi wasiirra ah u saartay baarista maxaabiis Nabad sugiddu xasuuqaday. |
Daawo muuqaalka: Dowlada Soomaaliya oo guddi wasiirra ah u saartay baarista maxaabiis Nabad sugiddu xasuuqaday.
Golaha wasiiraxa federalka Soomaaliya ayaa maanta guddi wasiirra ah u saartay maxaabiis horay ugu xirnaa xabsiyada ay maamusho nabad sugidda oo laba habeen oo isku xigta lagu khaarijiyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Kulanka golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay wasiirka koowaad ee dalka ayaa waxa lagu magacaabay gudi kakooban wasaarada Warfaafinta, arimaha gudaha iyo garsoorka si ay u daba galaan wixii qasbay in maxaabiis lagu ogaa xabsiyada nabad sugiddu maasho lagu kaarijiyo magaalada gudeeheeda iyada oo aan maxkamadi xukumin.
Gudiga sedaxda wasaaradood ka kooban ayaa lafilayaa in si deg deg ah war uga soo saaraan sideed ruux oo shabaabnimo markii hore nabad sugiddu u qabatay kadibna laba habeen oo isku xigta lagu dilay degmooyinka Yaakhshiid iyo Deyniille ee gobalka Banaadir.
Taliyaha Nabad sugidda Soomaaliyeed ayaa waxa uu dhawaan amar ku bixiyay in ciidanka uu madaxda u yahay ay khaariji karaan cid kasta oo ay Shababnima uga shakiyaan arintaas oo wada u furtay in ruux kasta oo nabad sugiddu aysan raalli ka aheyn lakhaariji karo iyada oo loogu gabanayo Shabaabnimo.